Deshedding Turu Vagadziri & Vatengesi | China Deshedding Chishandiso Fekitori
Dual Musoro Imbwa Deshedding Chishandiso
1.Iyo mbiri yepamusoro imbwa yekudyara chishandiso ine yakagovaniswa meno kuti ibvise nokukurumidza yakafa kana yakasununguka undercoat vhudzi, mapfundo uye tangles kune zvirinani kushambidzika mhedzisiro.
2.Iyo mbiri yemusoro imbwa deshedding chishandiso haisi kungobvisa chete undercoat yakafa, asi zvakare inopa ganda kukwenya kusimudzira ganda kutenderera kweropa.Meno akagadzirwa kuti apinde zvakadzika mukati mejasi pasina kukwenya ganda rako remhuka dzinovaraidza.
3.Iye mbiri musoro imbwa yekudyara chishandiso ndeye ergonomic ine anti-slip yakapfava mubato.it inokodzera zvakakwana muruoko. Hapasisina ruoko kana ruoko rwechiremera chero bedzi uchikwesha chipfuwo chako.
DeShedding Turu Yembwa
1.Deshedding Turu Yembwa nesimbi isina simbi kumucheto inosvika kuburikidza ne topcoat kuti zvakachengeteka uye nyore kubvisa bvudzi rakasununguka uye undercoat.it zvakare inogona kunyatso kumesa yakadzika furhu uye kukurudzira ganda kutenderera kweropa.
2.Chishandiso chekudyara imbwa chine banga rakakomberedzwa risina simbi, Yakaringana mutsara wemhuka kuti zvipfuyo zvako zvinoyemurika zviwedzere kunakidzwa negadziriro, inokodzera katsi nembwa nedzimwe mhuka dzine bvudzi pfupi kana refu.
3.This deshedding chishandiso chembwa dzine makumi mashanu makumi mashanu bhatani bhatani bhatani, kungoita kamwe chete kuchenesa uye kubvisa 95% bvudzi kubva pameno, chengetedza nguva yako kuchenesa muzinga.
Imbwa Shedding Blade Brush
1.Our imbwa inodurura blade bhurasho ine inochinjika uye yekukiya blade nemabatiro ayo anogona kupatsanurwa kuti agadzire kusvika gumi nemasere pakureba kuteura rake zvichiita kuti ikurumidze uye nyore kushandisa.
Iyi imbwa inodurura blade bhurashi inogona zvakachengeteka & nekukurumidza inobvisa yakasununguka peturu bvudzi kudzikisa kuteura. Iwe unogona kushongedza chipfuwo chako kumba.
3.Pane kukiya pane mubato, zvinoita kuti chokwadi kuti banga harifambe panguva yekushambidzika
4.Imbwa inodurura blade bhurashi inoderedza kuteura kusvika 90% ine imwechete chete maminetsi gumi neshanu yekushambadzira svondo.
Imbwa Uye Cat Deshedding Turu Brush
Imbwa Uye Cat Deshedding Chishandiso Brashi inokurumidza, yakapusa uye inokurumidza nzira yekubvisa uye kudzikisa chipuka chako chemukati mumaminetsi.
Iyi Imbwa Uye Cat Deshedding Turu Brush inogona kushandiswa pambwa kana kitsi, hombe kana diki. Yedu Imbwa Uye Cat Deshedding Chishandiso Brashi inoderedza kuteura neanosvika 90% uye inobvisa yakamonana uye yakakwenenzverwa bvudzi pasina kunetseka kukweva.
Iyi Imbwa Uye Cat Deshedding Chishandiso Brushes rakasununguka bvudzi, tsvina uye marara kubva kune yako chipfeko chejasi kuichengeta ichipenya uye ine hutano!